Pinki Tunnel Apk Download Ho an'ny Android [VPN] - Luso Gamer
Ny VPN dia heverina ho fitaovana karohina sy alaina indrindra eran-tany. Ny ankamaroan'ny fitaovana tsy miankina virtoaly azo tratrarina amin'ny Internet dia premium ary mitaky famandrihana. Saingy eto izahay dia nitondra ity mandroso maimaim-poana ity mba hisintonana Pinki Tunnel.
Ity fitaovana Apk ity dia maimaim-poana ary tsy mila famandrihana. Saingy heverina fa ilaina ny fisoratana anarana ary tsy misy fahazoan-dàlana fidirana, tsy azo atao ny miditra amin'ny endri-javatra pro. Na dia tsy afaka mahita bokotra fisoratana anarana mivantana ao anatiny aza izahay.
Ka ireo izay vonona ny hijery sy hankafy ny endri-javatra premium ny fitaovana. Tsy maintsy mifandray amin'ny admin aloha amin'ny fampiasana ny dashboard fifandraisana. Ary miditra mora foana ny uplinks mpizara tsy manam-petra miaraka amin'ny adiresy IP samihafa maimaim-poana nefa tsy mandany fotoana sy loharano.
Inona no Pinki Tunnel Apk
Pinki Tunnel VPN dia fitaovana Android tohanan'ny antoko fahatelo an-tserasera namboarin'ny Sunmoon Technologies. Ny tanjon'ny fanolorana ity sehatra vaovao ity dia ny hanomezana loharano an-tserasera maimaim-poana. Aiza no ahafahan'ny mpikambana voasoratra anarana miditra mora foana amin'ireo mpizara uplink samihafa maimaimpoana.
Ny foto-kevitry ny fitaovana protocol manokana virtoaly dia tonga taorian'ny fotoana nanombohan'ny olona eran'izao tontolo izao miatrika olana. Toy ny fanakanana tranokala, rindranasa ary olana amin'ny hacking sns. Na dia maro aza ny fampiharana android tsy hita eran-tany.
Na ireo izay mahomby amin'ny fampidinana ireo fampiharana ireo, dia mety tsy ho afaka miditra amin'ny dashboard lehibe any aoriana. Satria ireo fampiharana ireo dia voafetra amin'ny adiresy IP firenena. Noho izany, ny fametrahana ny fitaovana VPN dia hanampy mora amin'ny fahazoana adiresy IP firenena samihafa.
Ary koa, hanampy amin'ny famahana ny protocoles famerana amin'ny fahazoana adiresy IP amin'ny firenena samihafa. Noho izany dia tianao ny endri-javatra pro amin'ny VPN ary vonona ny hanararaotra izany. Dia inona no andrasanao? Ampidino fotsiny ny fampiharana ary ankafizo ny endri-javatra premium.
anarana Pinki Tunnel
Anaran'ny fonosana com.tunnelguru.toofan.all
Raha mijery ny lasa isika dia tsy dia kely loatra ny olana mifandraika amin'ny cyber ka tsy nisy nieritreritra ny fitaovana hacking. Saingy miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia, manam-pahaizana maro no manomboka mieritreritra ny hanolotra rafitra fiarovana avo lenta ho an'ny olona.
Tsy vitan'ny hoe hampihena ny mety hisian'ny hacking izany fa hanampy amin'ny famongorana tanteraka ny olana hacking. Noho izany, mifantoka amin'ny tanjona sy ny hevi-dehibe, dia nahomby tamin'ny famolavolana ity fitaovana vaovao antsoina hoe VPN ity ny mpamorona.
Ny fampidirana ny fampiharana ao anatin'ny finday Android dia tsy hanampy amin'ny famahana ireo sehatra voasakana samihafa. Saingy manampy ny mpampiasa amin'ny fanaovana ny fifandraisany amin'ny Internet ho azo antoka sy matanjaka kokoa. Eny, ny fampandehanana ny VPN App dia hanala tanteraka ny olana rehetra amin'ny hacking.
Ny dingana fametrahana sy ny fampiasana ny fampiharana dia tena tsotra. Voalohany, manoro hevitra ny mpampiasa Android izahay hisintona ny kinova farany an'ny Apk avy eto. Ampidiro ao anatin'ny finday Android ary midira ny pejy lehibe ao anatin'izany ny lisitry ny mpizara.
Safidio ny iray amin'ireo mpizara azo tratrarina amin'ny fametrahana fifandraisana. Raha vantany vao vita ny fifandraisana, dia afaka miditra mora foana amin'ny sehatra voasakana rehetra ny mpampiasa android. Noho izany dia vonona ny hijery ireo endri-javatra pro amin'ny fampiharana ianao dia apetraho ny Pinki Tunnel Download.
Ny fametrahana ny fampiharana dia manome fidirana mivantana amin'ireo mpizara maro.
Ny fisafidianana ny servisy azo tratrarina dia hanampy amin'ny fananganana fifandraisana.
Izany dia manampy amin'ny famoahana ireo sehatra famerana samihafa.
Ankoatra izany, manampy amin'ny fiarovana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny Internet.
Voasakana ny doka avy amin'ny antoko fahatelo.
Mpizara firenena maro azo tratrarina.
Ny hafainganam-pandeha farany ambany indrindra amin'ny fifandraisana tsirairay dia 1Gbps.
Misy ihany koa ny famindrana GPS.
Ahoana ny fametrahana Pinki Tunnel VPN App
Amin'izao fotoana izao dia azo idirana amin'ny Play Store ny fampiharana. Saingy voasokajy ao amin'ny fizarana famerana. Midika izany fa tsy afaka miditra amin'ny rakitra Apk mivantana ireo mpampiasa Android. Ka inona no tokony hataon'ny mpampiasa Android amin'ny toe-javatra toy izany?
Noho izany dia sahiran-tsaina ianao ary mitady loharano azo antoka amin'ny Internet hisintonana ny rakitra Apk. Tsy maintsy mitsidika ny tranokalanay ary misintona ny kinova farany amin'ny App avy eto. Kitiho fotsiny ny bokotra rohy fampidinana nomena ary misintona mora foana ny fampiharana.
Eritrereto raha misy fampiharana azo idirana amin'ny Play Store. Midika izany fa azo antoka ny fampidinana ary madio ampiasaina. Ity fitaovana Apk manokana ity dia azo tratrarina amin'ny fivarotana kilalao. Midika izany fa azo antoka ny fametrahana sy ny fampiasana azy. Na ny rakitra Apk tany am-boalohany aza dia azo alaina avy eto koa.
Efa namoaka sy nizara fitaovana hafa mitovy amin'ny VPN hafa izahay eto amin'ny tranokalanay. Raha liana amin'ny fikarohana ireo fitaovana hafa mitovy ireo ianao dia tsy maintsy manaraka ny rohy. izay DS Tunnel Apk ary ITIM VPN Apk.
Raha sendra olana ianao amin'ny fihoaran'ny fifandraisana Internet azo antoka. Avy eo dia manoro hevitra anao izahay misintona sy mametraka ny dikan-tsarimihetsika Pinki Tunnel Apk nohavaozina. Izany dia azo idirana amin'ny tranokalanay amin'ny safidy kitihina iray.
Sokajy Tools, Apps Tags Pinki Tunnel, Pinki Tunnel Apk, Pinki Tunnel App, Pinki Tunnel Download, VPN Post Fikarohana
Unpacking Game Apk Download Ho an'ny Android [lalao]